२ कोरिन्थी १ | अनलाइन बाइबल | नयाँ संसार अनुवाद (२०१०)
२ कोरिन्थी १:१-२४
१ परमेश्वरको इच्छाद्वारा ख्रीष्ट येशूको प्रेषित* बनेको म पावलबाट र हाम्रो भाइ तिमोथीबाट कोरिन्थमा भएको परमेश्वरको मण्डलीका साथै सारा अखैयामा भएका सबै पवित्र जनहरूलाई पत्र: २ परमेश्वर, हाम्रा बुबाबाट र प्रभु येशू ख्रीष्टबाट तिमीहरूलाई असीम अनुग्रह र शान्ति मिलोस्। ३ हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टका परमेश्वर र बुबा धन्यका होऊन्‌। उहाँ कोमल कृपाका बुबा र सबै सान्त्वनाका परमेश्वर हुनुहुन्छ। ४ उहाँले हाम्रा सबै सङ्कष्टहरूमा सान्त्वना दिनुहुन्छ, ताकि जुन सान्त्वना हामीले परमेश्वरबाट पाएका छौं, त्यही सान्त्वनाद्वारा हरप्रकारका सङ्कष्टमा परेकाहरूलाई हामी सान्त्वना दिन सकौं। ५ जसरी हामीले ख्रीष्टका लागि प्रशस्त दुःख भोगिरहेका छौं, त्यसरी नै ख्रीष्टमार्फत प्रशस्त सान्त्वना पनि पाइरहेका छौं। ६ चाहे हामी सङ्कष्टमा हौं, त्यो तिमीहरूकै सान्त्वना र उद्धारको लागि हो; वा चाहे हामीले सान्त्वना पाइरहेका हौं, त्यो तिमीहरूकै सान्त्वनाको लागि हो, जसले तिमीहरूलाई हामीले भोगिरहेको जस्तै कष्ट सहन मदत गर्छ। ७ अनि तिमीहरूको विषयमा हाम्रो आशा दृढ छ, किनकि हामीलाई थाह छ, जसरी तिमीहरूले हामीसँगसँगै कष्ट भोगिरहेका छौ, त्यसरी नै तिमीहरूले हामीसँगै सान्त्वना पनि पाउनेछौ। ८ भाइहरू हो, एसिया* प्रान्तमा हामीमाथि आइपरेको सङ्कष्टबारे तिमीहरू अनजान रहो भन्ने हामी चाहँदैनौं। त्यहाँ छँदा, हामीले सहनै नसक्ने भयङ्कर बोझ हामीमाथि आइपरेको थियो; यहाँसम्म कि हाम्रो ज्यानको समेत ठेगान थिएन। ९ वास्तवमा, हामीलाई आफूले मृत्युदण्ड पाएजस्तै महसुस भएको थियो। हामीले आफैमाथि होइन तर मरेकाहरूलाई ब्यूँताउनुहुने परमेश्वरमाथि भरोसा राखोस् भनेर यस्तो भएको थियो। १० उहाँले हामीलाई मृत्युजस्तो भयानक कुराबाट छुटाउनुभयो र छुटाउनुहुनेछ। उहाँले हामीलाई पछि पनि छुटाइरहनुहुनेछ भनेर उहाँमा आशा राखेका छौं। ११ हाम्रो लागि उत्कट बिन्ती चढाएर तिमीहरूले पनि हामीलाई मदत गर्न सक्छौ। तब धेरै जनाको प्रार्थनाले गर्दा जुन दया हामीमाथि देखाइन्छ, त्यसका लागि धेरै जनाले हाम्रो तर्फबाट धन्यवाद दिन सक्नेछन्‌। १२ हामीले घमन्ड गर्ने कारण यो हो अनि यसको विषयमा हाम्रो अन्तस्करणले साक्षी दिन्छ: हामीले संसारसित र विशेष गरी तिमीहरूसित पवित्रता र परमेश्वरबाट पाइने निष्कपटतासहित व्यवहार गरेका छौं। हामी यस संसारको बुद्धिमा होइन तर परमेश्वरको असीम अनुग्रहमा भरोसा गर्छौं। १३ वास्तवमा, तिमीहरूलाई राम्ररी थाह भएको अनि तिमीहरूले स्वीकार पनि गरेको कुराबाहेक अरू विषयमा हामीले तिमीहरूलाई लेखेका छैनौं अनि मलाई आशा छ, तिमीहरूले ती कुराहरूलाई अन्तसम्मै स्वीकारिरहनेछौ, १४ अनि जसरी तिमीहरूले केही हदसम्म यो मानिलिएका छौ, कि हामी तिमीहरूले घमन्ड गर्ने आधार भएका छौं, हाम्रा प्रभु येशूको दिनमा तिमीहरू पनि त्यसरी नै हामीले घमन्ड गर्ने आधार हुनेछौ। १५ यसै कुरामा ढुक्क भएर तिमीहरूकहाँ दोस्रो खेप आउने मैले पहिल्यै विचार गरेको थिएँ, ताकि तिमीहरूले रमाउने अर्को मौका पाउन सक, १६ अनि यात्राको बीचमा तिमीहरूकहाँ केही समय बिताएर म्यासिडोनिया जान सकूँ र फेरि म्यासिडोनियाबाट तिमीहरूकहाँ नै फर्केर यहूदिया जाने बेला तिमीहरूले मलाई अलि परसम्म पुऱ्याइदिन सक। १७ जब मैले यस्तो विचार गरेको थिएँ, तब के मैले त्यसलाई हल्कासित लिएको थिएँ र? वा के मैले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न सुरुमा “हुन्छ, भइहाल्छ” भनौंला अनि पछिचाहिं “अहँ, हुँदैन” भनुँला भनेर योजना बनाएको थिएँ र? १८ तर जसरी परमेश्वरमाथि भरोसा गर्न सकिन्छ, त्यसरी नै यो कुरामा पनि भरोसा गर्न सकिन्छ, कि हामीले तिमीहरूलाई सुरुमा ‘हुन्छ’ भनेको कुरा पछि गएर ‘हुँदैन’ हुनेछैन। १९ किनकि परमेश्वरका छोरा ख्रीष्ट येशू, जसको विषयमा तिमीहरूलाई हामीले प्रचार गऱ्यौं अर्थात्‌ मैले, सिल्भानसले र तिमोथीले, उहाँ पनि ‘हुन्छ’ भनेर ‘हुँदैन’ हुनुभएको छैन तर ‘हुन्छ’ भनेपछि ‘हुन्छ’ नै हुनुभएको छ। २० परमेश्वरका प्रतिज्ञाहरू जतिसुकै भए तापनि ती उहाँद्वारा ‘हुन्छ’ भएका छन्‌। त्यसैले त परमेश्वरको गौरवको निम्ति हामी उहाँद्वारै “आमिन” भन्छौं। २१ तर तिमीहरू र हामी ख्रीष्टका हौं भनेर ग्यारेन्टी दिने र हामीलाई अभिषेक गर्ने परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। २२ उहाँले हामीमाथि आफ्नो छाप पनि लगाउनुभएको छ र आउँदै गरेको कुराको बैनास्वरूप पवित्र शक्ति दिनुभएको छ, जुन हाम्रो मनमा छ। २३ अब म परमेश्वरसामु आफ्नो ज्यानको कसम खाएर भन्छु, तिमीहरूलाई अझ दुःखी नबनाउनकै लागि म अहिलेसम्म कोरिन्थ नआएको हुँ। २४ हामी तिमीहरूका विश्वासको मालिक होइनौं, बरु तिमीहरूको आनन्दको निम्ति सहकर्मीहरू हौं, किनकि तिमीहरू आफ्नै विश्वासले गर्दा स्थिर छौ।
^ २को १:१ * वा, “पठाइएको जन।” ग्रीकमा “अपोस्टोलोस।”
^ २को १:८ * प्रेषित २:९ को फुटनोट हेर्नुहोस्।